Casa Molino de Viento - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJace
Ikhaya leendwendwe elitsha kraca elingqongwe ngamaphandle amangalisayo -- iCasa Molino de Viento likhaya elihle, langoku elithe thaa kwiintaba ezintle ezingqonge iOjochal kwaye ikunika ukubaleka okuthe cwaka. Phumla nje, thatha idiphu echibini okanye ungene kwiilwandle ezininzi ezicocekileyo, ezishushu ezikufutshane.
I-Ojochal yaziwa njengenkunzi yokutya yaseCosta Rica, eneendawo zokutyela ezingaphezu kwama-22. Ukusuka kwindawo yokutya ekumgangatho wehlabathi ukuya kwiivenkile zokutyela, uya kufumana phantse nantoni na enqwenelwa yintliziyo yakho.
ICasa Molino likhaya elitsha kraca, elikwintliziyo yeOjochal. Ipropathi iyilwe kwaye yaphuhliswa kulo nyaka nje, ibonelela ngekhitshi elitsha kraca elinezinto ezigcweleyo, igumbi lokutyela, kunye negumbi lokuhlala elijongiwe ukuze banandiphe ngokuhlwa. Le ndawo ikhethekileyo iqulethe i-rancho egqunyiweyo kunye nedama lokudada ukuze uphumle. Indawo yephuli kwabelwana ngayo phakathi kwendlu yethu neyakho (kuxhomekeke kwixesha lonyaka).
Ubumelwane obuzolileyo, obunobuhlobo obunabanye abantu abaninzi ababehamba kunye nabahlali. Simi elalini, sibuyela kwindawo eluhlaza emahlathini, apho sihlala sibona iitoucans, iingcungcu, iiScarlett macaws, iindidi ezininzi zamabhabhathane kunye nosapho looxam. Iyadi yangaphambili iqhayisa ngembonakalo entle yentaba eqinisekileyo iya kuchukumisa
Umbuki zindwendwe ngu- Jace
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ojochal